Entrepreneurship Networking Party (ENP) - Career.com.mm
Entrepreneurship Networking Party (ENP)
Entrepreneurship, Work Jun 1, 2017 0
Happy New Year to all friends who are interested in entrepreneurship in Myanmar…
The Myanmar Young Entrepreneurs Association (MYEA) would like to invite you to the 4th edition of the Entrepreneurs Networking Party (ENP) where you can meet like-minded people, exchange ideas and discover new business opportunities in an informal setting.
The ENP takes place on 12th January 2017 at the Penthouse. The number of guests has steadily grown over the last parties and we have welcomed several interesting people. Everyone, from established entrepreneur to young people who are considering starting up their own business, is welcome at the party. You do not need to beamember of MYEA, there is no dress code and no entrance fee. However, you can order food and drinks at your own expense from the bar.
For anyone interested in joining MYEA, we will have an membership counter ready. We are expecting all of you at ENP.
Time: 6:30 PM – 21:00 PM
Location: The Penthouse, 271-273 Parkside One Building, Bagaya Street
နှစ်သစ်မှာ လူငယ်စွန့်ဦးအားလုံးနဲ့အတူ ပျော်ပျော်ပါးပါးဆုံတွေ့ရင်း မိတ်သစ်ဆွေသစ် စီးပွါးရေးအခွင့်အလမ်းသစ်တွေကို ရှာဖွေလိုက်ကြရအောင်!!
Entrepreneurship Networking Party (ENP) ဆိုတာ စွန့်ဦးလုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ လုပ်ငန်းသစ်စတင်လိုသူတွေအတွက် လွတ်လပ်စွာတွေ့ဆုံနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးတဲ့ သမားရိုးကျမဟုတ်တဲ့ ပါတီပုံစံပွဲအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဝင်ကြေးအခမဲ့ဖြစ်ပြီး အစားအသောက်အတွက် ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ် စိတ်ကြိုက်ဝယ်ယူစားသောက်နိုင်သလို စားရင်းသောက်ရင်း မိတ်သစ်ဖွဲ့နိုင်အောင်၊ မိတ်ဟောင်းချင်းအဆက်အသွယ်မပြတ်ထိတွေ့နိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထားတဲ့ပွဲပါ။ အဝတ်အစားအတွက်လဲ သတ်မှတ်ချက်မရှိပါဘူး။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ENP က တစ်ဆင့် လုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းတွေ ရလာနိုင်အောင်၊ မိတ်ဆွေသစ်တိုးပွါးလာအောင်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့ လုပ်ငန်းစတင်လိုသူတွေဆုံတွေ့နိုင်အောင်၊ အတွေ့အကြုံတွေ ဖလှယ်နိုင်အောင် ဖြစ်ပါတယ်။
ဇန်နဝါရီ (၁၂)ရက်နေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (MYEA) က ကျင်းပမယ့် ပွဲလေးက စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်ပြီး ၂၀၁၇အတွက် ပထမဆုံးပွဲလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်ပွဲတွေရဲ့ ရလာဒ်အရ တစ်ကြိမ်ထက်တစ်ကြိမ် ပွဲတက်ရောက်သူဦးရေ များပြားလာတာကိုတွေ့ရသလို စိတ်ဝင်စားစွာပွဲကို တက်ရောက်လာတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေနဲ့ လုပ်ငန်းသစ်စတင်လိုသူတွေ၊ ကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့ Top Management တွေပါ တစ်ပွဲထက်တစ်ပွဲ ပိုမိုတက်ရောက်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။
MYEA ဆိုတာ လူငယ်လုပ်ငန်းရှင်များစွာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ တစ်နေ့တစ်ခြားတိုးတက်ကျယ်ပြန့်လာသော အသင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တာ ကြောင့် အသင်းဝင်များအနေနဲ့လည်း အသင်းသားအချင်းချင်းဆုံတွေ့နိုင်အောင်၊ အသင်းဝင်လိုသူများလည်း ချက်ချင်းဝင်နိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထားပြီး နေရာကိုလည်း အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်အောင် The Penthouse မှာ စီစဉ်ထားပါတယ်။
အကောင်းဆုံး အခွင့်အလမ်းတွေပေးမယ့် ပွဲကြီးကတော့ အသင့်စောင့်နေပါပြီ။ လက်မလွတ်စေဖို့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း ပျော်ပျော်ပါးပါးအတူသွားဖို့ အကြောင်းကြားလိုက်ပါဦး။
နေ့ရက်။ ။ ၁၂.၁.၂၀၁၇ (ကြာသပတေးနေ့)
အချိန်။ ။ ညနေ ၆:၃၀ – ၉:၀၀ နာရီ
နေရာ။ ။ The Penthouse (၂၇၁ – ၂၇၃၊ ဗားကရာလမ်း၊ တော်လှန်ရေးပန်းခြံအနီး၊ ၈လွှာ)